Soamanandrariny-Ambohimangakely : Fitokanana ny « Poste avancé » Zandarimariam-pirenena
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2013 → décembre → 19 → Soamanandrariny-Ambohimangakely : Fitokanana ny « Poste avancé » Zandarimariam-pirenena
Redaction Midi Madagasikara 19 décembre 2013 Faits-Divers : Soamanandrariny; Dr Andrianarison Harinaina Olivier
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny alarobia 18 desambra 2013 ny « Poste avancé » ‘ny zandarimariam-pirenena ao Soamanandrariny, fokontany iray anisan’ny be mponina indrindra ao anatin’ny kaominina Ambohimangakely. Antony manokana nananganana ity « poste avancé » vaovao ity ny hanatonan’ireo mpitandro filaminana ny vahoaka, mba hahafahan’izy ireo mamonjy ara-potoana raha sendra misy fanafihan-jiolahy. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary eo ho eo no nentina nanamboarana ity fotodrafitrasa ity , ezaka nataon’ireo vahoaka ny 4 tapitrisa ariary ary fanampiana avy amin’ny kaominina ambanivohitra Ambohimangakely kosa ny ambiny. Ahitana birao fiasana roa sy efitrano 3, izay natokana hipetrahan’ny “Chef de poste”.
Mbola maro hoy ny Dr Andrianarison Harinaina Olivier, Ben’ny tanànan’Ambohimangakely ny ezaka hataon’ireo vahoaka sy ny kaominina Ambohimangakely hanatsarana ity “poste avancé” ity,satria dia mitentina 1 miliara ariary eo ho eo no ilana mba hahatonga izany trano fiasana izany ho tena manara-penitra. Nefa noho ny krizy misy eto amin’ny firenena dia izao aloha no vitan’izy ireo. Nanolotra fiara “minibus” iray hoan’ny Tobim-paritry ny zandarimaria (brigade) Ambohimangakely ihany koa ny tenany mba ho fanampiana ireo zandary miasa ao amin’ny fanatanterahany ny asa fitandroana ny filaminana.
Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny fitokanana ny Jeneraly Ravalomanana Richard, kaomandin’ny zandarimariam-pirenena notronon’ireo manamboninahitra sivily sy miaramila, ireo fikambanan’ny vady zandary ary.
Fanomezan-toky lehibe no nataon’Atoa jeneraly, kaomandin’ny zandarimariam-pirenena nandritra ny lahateny izay nataony, fa hisy ny fanarahamaso ireo zandary miasa amin’izany “poste avancé” vaovao izany amin’ny fanatanterahany ny asany an-tsakany sy an-davany. Vola 5 tapitrisa ariary kosa no natolony ny kaominina Ambohimangakely mba ho fanampiana azy amin’ny ezaka mbola hataon’izy ireo amin’ny fanatsarana ity “poste avancé” vaovao ity, hanatsarana hatrany ny asa fitandroana filamianana.